Fampiasa Mica amin'ny Indostria mpanao sary hoso-doko sy marika | Lingshou
(1) Fampiharana barazy
Amin'ny sarimihetsika miloko, ny mpanefy flaky dia hamolavola fomba amina mitovy aminy, ka izany no manakana ny fidiran'ny rano sy ny zavatra manimba hafa, ary raha mampiasa vovoka mica avo lenta (maribatra ny savaivony mihena 50, fara fahakeliny, avo 70 heny), ity karazana fitotoana matetika dia hitatra in-3. Satria ny mpitrandraka mika dia lafo lavitra noho ny résin-doko manokana, manana lanja teknolojia sy avo lenta tokoa izy.
Raha tsorina dia ny fampiasana mofomamy mica manana kalitao lehibe dia fomba lehibe hanatsarana ny kalitao sy ny fanatontosana ny fanoherana anti-korosi ary ny rindrina ivelan'ny rindrina. Mandritra ny dingan'ny coating, alohan'ny hanamafisana ny sarimihetsika hoso-doko, dia hipetraka eo ambanin'ny fihenan-tsofina ny voanjo mica ary avy eo dia mifanamboatra ara-drariny mifanohana sy amin'ny endrika sary hoso-doko. Ny firindrana amin'ity karazana filamatra mifanitsy ity dia mifanitsy amin'ilay sarin-tsolika vita amin'ny loko miorim-bolo, ka noho izany dia miteraka fiatraikany amin'ny sakana indrindra. Ny olana dia tsy maintsy tonga lafatra ny firafitry ny mika flaky, satria ny orinasan'ny indostria vahiny nametraka ny fenitra fa ny tahan'ny savaivotry ny savaivony dia tokony ho 50, fara fahakeliny, mihoatra ny 70 heny, raha tsy izany dia tsy ho tiana ny vokatra, satria ny hoditra manify dia, ny lehibe kokoa ny faritra sakana mahomby miaraka amin'ny taham-pahavitr'ireo mpanefy, mifanohitra amin'izay, raha matevina ny sombin-tariby, dia tsy afaka mamorona takelaka sakana be dia be izy io. Izany no antony mahatonga ilay mpameno vato fa tsy manana an'io fiasa io fotsiny. Ary koa, ny perforation sy avulsion amin'ny mika mika dia misy fiantraikany lehibe amin'ny andraikitra sakan'ny sakantsakana (mety hidy tanteraka ny zavatra simba). Ny mihavitsy amin'ny sakan'ny mika, ny lehibe kokoa ny faritra sakana miaraka amin'ny taham-pon'ny mpangaro. Ny vokatra tsara kokoa dia ho tratra miaraka amin'ny habeny antonony (manify loatra tsy tsara foana).
(2) Fanatsarana ny toetra ara-batana sy mekanika amin'ilay sarimihetsika
Ny fampiasana ny vovony mica lena mando dia afaka manatsara andian-doko ara-batana sy mekanika mpanao sary hosodoko. Ny fanalahidy dia ny toetran'ny morpholo amin'ny famenoana, izany hoe, ny refy santimetatra amin'ny sakamalaho amin'ny flaky filler ary ny halavam-potoana misy ny halavan'ny mpanefy fibra. Graner filler dia mihetsika toy ny fasika sy ny vato ao amin'ny simenitra simenitra hanatsarana ny vy.
(3) Manatsara ny fanatanjahan-tena amin'ny haingon-trano amin'ny sarimihetsika
Ny hamafin'ny resin mihitsy dia voafetra, ary ny hamafin'ny karazan-mpameno dia tsy avo lenta (ohatra, talcum powder). Mifanohitra amin'izany, ny mika, iray amin'ireo singa amin'ny granita, dia tsara tokoa amin'ny halehiben'ny hamafiny sy ny herin'ny mekanika. Noho izany, ny fametrahana mika ho feno filler, ny mari-pahaizana manohitra ny fanaovana akanjo dia azo hatsaraina tsara. Izany no mahatonga ny vovony mica amin'ny fomba tsara kokoa ampiasaina ho an'ny sary miloko, sary hoso-doko, palitao manohitra ny fahakisan-tanana sy ny valin-drindrina.
Mica, miaraka amin'ny tahan'ny fanoherana herinaratra avo lenta (1012-15 ohm · cm), dia izy no tena fitaovana insulation tsara indrindra ary teknolojia ampahibemaso hampiasana azy io hanatsarana ny fananan'ny insulation ny sary hoso-doko. Ny mahaliana dia rehefa miasa miaraka amin'ireo fitaovana vita amin'ny gony vita amin'ny silikon voajanahary sy ny silic ary ny borikin-tsolika voajanahary ny fiarahany miasa rehefa mivory miaraka amina haingon-tsolika misy herinaratra tsara sy fananana miady amin'ny zon-trosa raha sendra mahazo hafanana avo. Noho izany, ny tariby sy tariby vita amin'ity fitaovana mihetsika ity dia mbola afaka mihazona ny fananana insulation tany am-boalohany na dia taorian'ny afo aza, izay tena ilaina amin'ny vanja, ny tonelina, ny tranobe manokana ary ny fitaovana, sns.
(5) fanoherana ny afo
Ny vovony Mica dia karazana mpamono afo miadidy tena sarobidy ary afaka ampiasaina izy io mba hanaingoana ny afo mirehitra sy afo matevina raha ampiharina amin'ny retraire flame halogen.
(6) Fahazavana anti-UV sy tsy azo idirana
Tena tsara tokoa i Mica amin'ny fiarovana ny ultraviolet sy ny taratra infra redrp, sns sns. Ny fampidirana vovoka mica mando any anaty loko ivelany dia afaka mampivoatra ny fampisehoana an-tsokosoko amin'ny haino aman-tsarety ary mampiadana ny fahantrany. Amin'ny alàlan'ny fampisehoana azy amin'ny fiarovana ny tara-pahazavana, ny mika dia ampiasaina amin'ny fanaovana fitazonana hafanana sy ny fitaovana famonoana hafanana (toy ny loko).
(7) Fampihenana ny fampihenana
Tena tsara ny fampitsaharana ny fampiatoana ny mika amin'ny tany mando. Ny sombin-tariby manify sy bitika dia afaka mampiato maharitra amin'ny haingam-pandeha tsy misy sedimentation hierarchical. Noho izany, rehefa mampiasa vovony mika ho filler fa tsy ho mihena mora, dia hihabe ny fitoniana ny fitahirizana coating.
(8) Fandrefesana ny hafanana ary ny fiakaran'ny hafanana
Mica dia manana fahaiza-manao lehibe amin'ny taratra infra redrasta taratra. Ohatra, rehefa miasa miaraka amin'ny oxide vy, sns, dia afaka mamorona fiantraikan'ny hafanana mafana tsara. Ny ohatra iray tena mahazatra dia ny fampiharana azy amin'ny alàlan'ny spacecraft coatings (mampihena ny mari-pana amin'ny masoandro amin'ny alàlan'ny folo). Betsaka ny sary hosodoko mandrafitra ireo singa fananganana sy haingon-trano avo lenta rehetra no mila mampiasa ny loko manokana misy vovoka mika, satria ny palitao toy izany dia mbola mety ho miasa ambanin'ny hafanana avo be, toy ny 1000 ℃ na ny sisa. Amin'io fotoana io dia ho lasa mafana ny vy, fa tsy milamina ny loko.
(9) Vokatra gloss
Mica dia manana gloss pearlescent tsara, noho izany, rehefa mampiasa vokatra mica lehibe sy manify manify, dia afaka mamirapiratra, mamirapiratra na mamirapiratra ireo fitaovana, toy ny loko sy ny valizy. Mifanohitra amin'izany, ny vovony mica tena tsara dia afaka manao fiverimberina ary mifampandinika tsara eo amin'ireo fitaovana, ka mamorona fiantraikany mahafinaritra.
(10) Fampivoarana feo sy fanamafisam-peo
Mica dia afaka manova ny andiam-panovana ara-batana ny akora ary koa manangana na manova ny viscoelasticity. Ny fitaovana toy izany dia mahomby amin'ny angovo mangovitra ary koa ny fahatafintohinana sy onjan-peo. Ankoatr'izay, ny onja manafotra sy ny onjan-peo dia mamorona fandinihana miverimberina eo anelanelan'ny mika mika, izay miteraka fahalemena ny angovo. Noho izany, ny tany maina mica dia ampiasaina koa amin'ny fanomanana ny fitaovana fanamafisam-peo sy fanamafisam-peo.